इलाम टी प्रोड्युसर्स प्रालीमा आगलागी
इलाम सूर्योदय नगरपालिका ४ अन्तुको इलाम टी प्रोड्युसर्स प्रालीमा आगलागी भएको छ।
मनषा थाइफुड्स उद्योगमा आगलागी
झापा, २९ माघ: झापाको मेचीनगर नगरपालिका १४ दुहागढीस्थित मनषा थाइफुड्स उद्योगमा आज बिहान आगलागी भएको छ । आगो अहिलेसम्म पनि निभाउन सकिएको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला अध्यक्ष लोकराज ढकालका अनुसार उद्योगमा बिहान चार बजे आगलागी भएको हो । आगो निभाउन झापा, मोरङ, इलाम र सुनसरीका १२ दमकल प्रयोग गरिएको छ । आगो अझै […]
इलामको सूर्योदय नगरपालिका–४ अन्तुमा रहेको इलाम टी प्रोर्डयुस प्रालिद्वारा सञ्चालित अन्तु भ्याली टी स्टेटमा आगलागी भएको छ । दिउँसो साढे तीन बजेबाट सुरु भएको आगलागि नियन्त्रणको प्रयासमा छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्ममा करिब आगलागी नियन्त्रणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।आगलागीबाट ठूलो क्षति भएको छ । पूर्णरूपमा आगलागी नियन्त्रण नभई के कति क्षति भयो […]
इलाम : इलामको सूर्योदय नगरपालिका–४ अन्तुमा रहेको अन्तुभ्याली चिया कारखानामा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट मेसिन, औजार र तयारी चिया सबै जलेर नष्ट भएको छ।इलाम चिया प्रोर्डयुस प्रालिद्वारा संचालित कारखानामा दिउसो ३ बजे सुरु भएको आगोले चिया कारखानाको तीन वटा भवनसहित सम्पूर्ण मेसिन औजार जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ।सूर्योदय नगरपालिकाका दुईवटा बारुणयन्त्र, इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरका प्रहरी निरीक्षक देउप्रसाद
अन्तु भ्याली चिया उधोगमा आगलागी
इलामको सूर्योदय नगरपालिका–४ अन्तुमा रहेको इलाम टि प्रोडुसर्स प्रालिको अन्तुभ्याली चिया कारखानामा आगलागी हुँदा दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको क्षति भएको छ। चिया उद्योगको भवन मेसिन उपकरण र उद्योगमा रहेको...
इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिका ४ अन्तुको चिया कारखानामा आगलागी भएको छ । आगलागी हुँदा कारखाना सहित मेसीन औजार र तयारी चिया सबै जलेर नष्ट भएको छ । इलाम टी प्रोर्डयुस प्रा.लिद्वारा संचालित कारखानामा दिउसो ३ बजे शुरु भएको आगोले चिया कारखानाको तीन वटा भवन सहित सम्पूर्ण मेसीन औजार जलेर नष्ट भएको हो । आगलागीबाट […] The post अन्तुको चिया कारखानामा आगलागी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
इलाम टी प्रोड्युसर्स प्रालिमा आगलागी
इलामकाे सूर्योदय नगरपालिका ४ अन्तुस्थित इलाम टी प्रोड्युसर्स प्रालिमा आइतबार आगलागी भएको छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल र प्रहरी परिचालन गरिएको इलामका प्रहरी प्रमुख एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
इलामको चीया कारखानामा भिषण आगलागी
इलाम, २ माघ । सूर्योदय नगरपालिकाको चीया कारखानामा भिषण आगलागी भएको छ । श्रीअन्तुस्थित इलाम टी प्रोड्युसर प्रा.लि. मा साँढे ३ बजेबाट आगलागी भएको हो । आगो निभाउन दमकल लगिएपनि नियन्त्रणमा आएको छैन । आगलागीबाट कारखाना ध्वस्त भइसकेको छ ।
इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिका– ८ मालुममा रहेको रक्तकाली टि स्टेटमा आगलागी भएको छ । दिनेश माझीले सञ्चालन गरेको उद्योगमा गए राति १२ बजेबाट आगलागी भएको हो । विद्युत् चुहावटबाट आगलागी हुँदा उद्योगमा रहेको तयारी चिया, प्रशोधन गर्ने मेसिन र अन्य भौतिक पूर्वाधार गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । […]
इलाम नगरपालिका–१ नेपालटारमा एक घर जलेर नष्ट हुँदा रु ४४ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । नेपालटार बजारभन्दा दुई किमी पूवाखोलातर्फको डिपीडाँडामा रहेको घरमा आगलागी हुँदा सो बराबरको क्षति भएको हो ।मङ्गलबार साँझ आगलागी भएको हो । विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा तेजबहादुर गुरुङको घर जलेर नष्ट भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापाका अनुसार घरमा भएका लत्ताकपडा तथा सबै सामान जल्दा रु ४४ लाख ७४ हजार ४०० बराबरको क्षति भएको हो ।आगो निभाउन स्थानीयवास
इलामको एक घरमा आगलागी, ४४ लाख बढीको क्षति
इलाम : इलाम नगरपालिका-१ नेपालटारमामा एक घर जलेर नष्ट भएको छ।बजारभन्दा २ किलोमिटर तल पूवाखोला तर्फको डिपी डाँडामा रहेको तेजबहादुर गुरुङको घरमा आगलागी भएको हो।विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट भएको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीयले प्रयास गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसक्दा घर र घरका सामग्री जलेर नष्ट भएको स्थानीयको भनाइ छ।आगलागीबाट ४४ लाख बढीको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।